Izimpawu zabantu mayelana nesimo sezulu
Izibonakaliso zesimo sezulu ziyisimo esivele sabantu futhi izizukulwane zidluliselwa komunye nomunye ngezibonakaliso ezahluke kakhulu ezitshela ukuthi isimo sezulu sizoba njani esikhathini esizayo. Ngokuvamile, i-omen isuka emaphandleni asekude akude. Ngaphandle kokwazi, kwakungekho bukhoma - kwakungenxa yabo ukucacisa ukuthi ukuvuna nini, nini ukuhlwanyela nokunye. Manje ikakhulukazi sifunda isimo sezulu ngembiko yezulu, kepha lokhu akusho ukuthi izimpawu ziyeke ukusebenza. Zingasetshenziswa manje, uma kunesidingo esinjalo.
Isimo sengqondo sabasebenzi bezimvula ezikhombisa izimpawu zesimo sezulu
Iningi lemibono yabantu yizibalo zezulu ezifanelekayo zibheke njengento engenamsebenzi. Lezi zibonakaliso ezinjengokuthi "Izinja ziyaqhuma phansi - kuzoba khona iqhwa noma imvula", "Uma inja idla kancane futhi ilala kakhulu - imvula", njll. Kodwa-ke, kunezibonakaliso eziningana, njengokuthi "I-violet ikhule - yisikhathi sokutshala i-parsley", "Amacici avele ebalazweni - yisikhathi sokuhlwanyela izinyosi", "Uma amaqabunga e-birch evuliwe ngokugcwele, ungatshala amazambane" aqinisile - acabangela ukuthi izitshalo uziphathe endaweni yemvelo futhi ngaphansi kweziphi izimo eziqala ukuqhakaza, ukuvula, ukuguqula iphunga futhi ubonise ezinye izimpawu ezibonisa ushintsho ezimweni zesimo sezulu.
Izibonelo kuzothatha isimo sezulu
Futhi imvelo ngokwayo, nayo yonke into exhunyaniswe nayo ngandlela-thile, ingaba izibonakaliso zokubikezela isimo sezulu, kodwa abantu abambalwa bayayibona. Ngezansi yizibonakaliso ezinokwethenjelwa kakhulu ongathola ngazo isimo sezulu esizayo:
Ngomusi ovela epayipi noma emlilweni - uma ngabe intuthu ikhuphuka esibhakabhakeni phezulu, khona-ke isimo sezulu sizocaca, futhi uma sihamba ngezinhlobo ezithile zemifino ngezindlela ezahlukene - linda isimo sezulu;
Ekuphumeni kwelanga isibhakabhaka sesibomvu - maduzane sizakuvula;
Izitshalo eziningi ngaphambi kokuba imvula ilahle umswakama owedlulele, njengokungathi "ukulila" isikhathi esithile ngaphambi kokugeza;
Kuhle kakhulu ukuzwa isimo sezulu sishintsha, izinambuzane eziningi. Uma uqaphela ukuthi izintuthwane zifihla izimpungushe ezijulile emanzini noma izinyosi zihamba emhlambini omncane kunomunye nomunye - kufanele usheshe uphahla noma uhlole uma unesambulela - maduzane imvula. Futhi, ama-parasite amaningi, njengezimpukane, umiyane, izimpukane ngaphambi kokuba imvula ibambe kancane kunezikhathi ezivamile;
Ucwaningo oluningi lwesayensi lubonisa ukuthi inhlanzi izwa isimo sezulu esihle kakhulu. Uma kungekudala imvula encane, khona-ke inhlanzi iyajula, futhi uma kwenzeka kuvela ukuduma okukhulu kwemvula, inhlanzi kuqala iphuma emanzini, bese iwela ngokujulile ngangokunokwenzeka. Ngisho nezinhlanzi ze-aquarium zithinta izinguquko zesimo sezulu - uma zimba isikhathi eside ngaphansi kwe-aquarium, khona-ke isimo sezulu sizocaca, uma sisondela eduze, cishe sizosa;
Kunezibonakaliso eziningi zezulu ezibikezela isimo sezulu ngokuziphatha kwamaxoxo avamile. Uma amaxoxo amaningi ehlala emhlabathini, maduzane imvula. Uma ama-crank amahlumela kakhulu ebusuku, ngosuku olulandelayo isimo sezulu sizocaca futhi sishiswe;
Abantu abaningi baye babona indlela esesimo sezulu esivela ngasogwini lolwandle olukhuphuka, kodwa bambalwa bayazi ukuthi lokhu kuyisibonakaliso esiqinisekile semvula yokuqala;
Ungakwazi ukubikezela isimo sezulu nezinyoni. Uma ondlunkulu ngaso sonke isikhathi bebonakala "begeza" othulini, kusho ukuthi kuyomvula maduzane. Futhi, ngaphambi kwemvula, izinyoni eziningi zihlala ezihlahleni futhi zimemeza kakhulu;
Uma unenja ekhaya, ungazama ukugcina ukuziphatha kwakhe. Uma inja yakho iwa phansi, kungenzeka ukuthi isimo sezulu sizophuluka maduzane, futhi uma sigxila kakhulu emhlabathini. Kodwa uma inja ilele ukusabalalisa ama-paws, khona-ke isimo sezulu sizofudumala futhi siphume;
Ukuzwela kakhulu kwezulu kushintshana ikati. Uma ikati likhonjwe isikhathi eside, maduzane lizoba yisimo sezulu esibi kakhulu, uma kukhonjwa komsila, kuyodla, futhi uma nje ilele ngokushesha, kungenzeka ukuthi ifudumele futhi ilanga.
Yiqiniso, kulolu hlu alukho ohlwini zonke izibonakaliso ezidlula phakathi kwabantu phakathi neminyaka, kodwa lolu hlu luvame ukukwazi ukubona ngesikhathi sezulu esibi esiseduze, ngisho noma kungenakubekwa ngaphambili isimo sezulu esibi. Ulwazi oluwusizo kakhulu luzothatha umdobi kanye nabazingeli - ukuze imvula eyaqala ingababambi ngokungazi. Yebo, futhi umuntu ojwayelekile angangena kulolu lwazi. Ngakho impumelelo kuwe kanye nesimo sezulu esihle!
I-Horoscope ka-2010 - unyaka we-Tiger yensimbi
I-magnet mascot yemali
Ukuziphatha komuntu ozalwa ngonyaka wenja
Izimpawu zabantu zikaDisemba
Kuyoba yini ubusika 2014-2015, ukubikezela sezulu
I-Horoscope ngoJanuwari: I-Capricorn
Ungasusa kanjani ama-breeches egibele?
Ukuphuza abantwana ngaphambi kokulala
Siyaqhubeka sijabula: usuku lwesibili lomshado
Isinaphi sokukhula kwezinwele
Ukuphila komuntu siqu ka-Ekaterina Andreeva
Uma udinga ukudla i-ananasini ukuze ulahlekelwe isisindo
Ukuphila okunomsoco kuyinto enhle: ithebula le-TableAir elihlakaniphile lisiza ukuba uphile
Ungenza kanjani izandla zakho zihle?